हाम्राे पिपलबाेट » काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तन कि निरन्तरता काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तन कि निरन्तरता – हाम्राे पिपलबाेट
काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तन कि निरन्तरता
आगामी फागुन पहिलो साता काँग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको छ । काँग्रेसको महाधिवेशन मिति तोकिएसँगै देश व्यापि रुपमा काँग्रेसका नेता एवम् आम कार्यकर्तामा एक किसिमको उर्जा देखिएको छ । नेपालको सबै भन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशनको चासो कार्यकर्ता र नेतामा मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा नै विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको बागडोर कसको हातमा जाने हो भनि वडा स्तरबाटै बहस सुरु हुन थालेको छ । १३ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको यो कार्यकाल सफल रह्यो वा असफल यसको सुस्मा रुपमा समिक्षा गर्दै आगामि महाधिवेशनलाई दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने कि शेर बहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेलकै नेतृत्वमा फेरी फनि काँग्रेस हाक्ने जिम्मेवारी वृद्धहरुकै काँधमा सुम्पने । के आम काँग्रेस कार्यकर्ताको मनोविज्ञानले यसको विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ । १३ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाले मेरो जित भनेको काँग्रेस भित्र मौलाएको गुटको अन्त्य र भागबण्डाको अन्त्य हो भन्ने कुरालाई प्रमुख केन्द्र विन्दुमा राखेर महाधिवेशनबाट सभापतिको ताज पहिरीए । तर १४ औं महाधिवेशनको संघारमा आई पुग्दा पनि गुट र भागबण्डा अन्त्य हैन झनै मौलाएको देखिन्छ भने झण्डै ५ वर्षको नेतृत्व गरेका पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालमा काँग्रेस पार्टीको गौरवपूर्ण ओजलाई इतिहासकै साँधुरो घेरामा बन्देज गरी दिए । अर्थात काँग्रेस चुनावमा नराम्रो पराजय भोग्न बाध्य भयो । यसको नैतिक जिम्मा काँग्रेसका सबै नेताहरुले लिनुपर्छ तर पार्टी सभापतिकै हैसियतले यसको जस वा अवसज बढी नै लिनुपर्दछ । स्थानिय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा हार व्यहोर्न बाध्य भएको काँग्रेस भित्रका कमजोरीहरु के–के छन् ? के कारण काँग्रेस पराजय भोग्नु प¥यो, यसमा नेतृत्व तहमा बहस हुनुपर्दैन ? आम जनतामा काँग्रेस प्रतिको निराशालाई किन चिर्न सक्षम देखिएन ? देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, दिन प्रतिदिन चरम रुपमा बढ्दो छ । किन काँग्रेस कुम्भकर्ण झै सुति रहेको छ ? सवाल प्रतिपक्षको भूमिका काँग्रेसले खेल्न सकेन् भन्ने आम जनतालाई लागि रहेको छ भने स्वयम् काँग्रेस कार्यकर्ताहरुपनि नेतृत्वको मौनतामा प्रश्न उठाईरहेका छन् । यसबाट आम कार्यकर्ताको मनोविज्ञानलाई के बुझ्न सकिन्छ भने पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्व सफल रहन सकेन् । त्यसकारण १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन जरुरी छ भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । तर पार्टी सभापति भने पुन सभापतिहुने दाउनमा लागि रहेका छन् । महाधिवेशनको संघारमा आएर नेताहरुलाई रिझाउन विभिन्न विभागहरु बाढ्दै हिडेको देखिन्छ । एकातिर महाधिवेशनको कार्यतालिका आएको छ भने अर्को तिर निर्वाचन आचार संहितालाई उल्लघंन गर्दै विभागहरु नेताको खल्तीमा हालेर जिम्मेवारी दिए जस्तो गरी आफु प्रति आर्कषित गरिरहेका छन् । जुन प्रवृति आम कार्यकर्तालाई पक्कै पनि उचित लागेको छैन् । त्यस कारण आगामि महाधिवेशन नत शेर बहादुर देउवा, नत रामचन्द्र पौडेल यि दुवै नेता १४ औं महाधिवेशनको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिन सक्षम छैनन् । त्यस कारण १४ औं महाधिवेशन एउटा मुद्धा बन्न सक्छ नेतृत्व परिवर्तन गरेर दोस्रो पुस्तामा अबको काँग्रेसको नेतृत्व हस्तारन्तण गर्ने ।
२००७ सालको जस्तो क्रान्तिकारी र २०१५ सालको जस्तो विवेकशिल र वैचारिक नेतृत्व अवको आम कार्यकर्ताले खोजे पहिलो पुस्ताबाट यो सम्भव छैन् । १४ औं महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्व जनतामा उर्जा र जागरण पैदा गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । आम नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तालाई दिशा दिने र राष्ट्रिय राजनीतिको अभिभावक बन्न सक्ने नेतृत्व खोजिको बहस १४ औं महाधिवशेनमा हुन्छ । काँग्रेसले इतिहास भजाएर खाने मात्र हैन वर्तमान र भविष्यको कार्यदिशा के हो स्पष्ट पारेर जनतालाई आस्वस्त बनाउन सक्नुपर्दछ । प्रजातान्त्रिक समाजवादको विश्लेषण तल्लो स्तरको कार्यकर्ता देखि नेता सम्म व्यापक रुपमा छलफल र विश्लेषण गर्दै २१ औं शताब्दि अनुकुल प्रजातन्त्रीक समाजवादको कार्यन्वयन अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्छ ।
त्यसका लागि वडा देखि केन्द्र सम्म सम्पूर्ण यूवा नेतृत्वले यसको बहस गर्न र गराउन सक्नुपर्छ । १४ औं महाधिवेशन काँग्रेसहरुको लागि अवसर र चूनौति दुवै हो । विविध चूनौतिलाई सम्मान गर्दै अवसरको रुपमा बदल्न सक्ने नेतृत्वको खोजि आम काँग्रेसी कार्यकर्ताहरु लागि परेका छन् । काँग्रेसको महासग्रममा तपाई हामी सबैले एकपटक काँग्रसलाई नेपालको शक्तिशालि पार्टीको रुपमा पुन फर्काउन र जिम्मेवार अभिभावकको भूमिकामा पु¥याउनु छ । संकल्प गरौं नेतृत्वको चाकडी हैन, सक्षम सबल र सहि नेतृत्वको खोजिमा बहस चलाऊ, पक्कै पनि १४ औं महाधिवेशनले तपाई हामीलाई निरास बनाउने छैन । बैचारिक ऐजेण्डा सहित नयाँ नेतृत्व आउने छ र काँग्रेसलाई शक्तिको दुष्टिकोणबाट पुरानै लयमा फकाउने छ भने विचारको देष्टिकोणबाट २१ औं शताब्दि अनुरुपको समाजलाई नेतृत्व दिन सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आम कार्यकर्तामा महाधिवेशनमा होमिसकेका छन् । काँग्रेसले आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ । यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई आगामी १४ औं महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वले पुनरताजकी दिनेछ तर हालको नेतृत्व जसरी इतिहासको सवैभन्दा कमजोर स्थानमा सिमित हुने छैन् । यो विश्वास आम काँग्रेसका कार्यकर्तामा जागृत भएको छ । त्यसकारण नयाँ सोच र उर्जा दिन सक्ने नेतृत्वले मात्रै काँग्रेसलाई विशालता प्रदान गर्न सक्नेछ । खास गरी अब आउने नेतृत्वले पार्टीलाई र काँग्रेसका कार्यकर्तालाई मात्र हैन विश्व जगतलाई नै भरोशा र विश्वास दिलाउन सक्नु पर्ने छ । काँग्रेस नेतृत्व पुरानै प्रवृतिबाट अगाडि बढिरहेको देखिन्छ तर सबैको अपेक्षा भनेको काँग्रेस परिवर्तन भएको हेर्न चाहिरहेका छन् । मुलत काँग्रेस नेतृत्व परिवर्तनसँगै समय सापेक्ष विचार र सोचलाई पनि परिवर्तन गर्न पर्दछ । काँग्रेस कार्यकर्ताले प्रश्न गरेका छन् । संधै काँग्रेस कार्यकर्ताहरुको मनोविज्ञानमा हिलो छ्यापेर आफु उम्किन मिल्छ ? के काँग्रेससँग ठोस कार्यदिशा नभएको हो ? के काँग्रेस वैचारिक स्खलन भएकै हो ? स्थानिय चुनावको मुखमा आएर माओवादीसँग गरिएको सहकार्य उचित थियो ? प्रधानान्याधिश, आईजीपि प्रकरण जस्ता विषयमा नेतृत्व किन चुक्यो । खै समिक्षा गरेको । काँग्रेसको स्पष्ट नीति के हो ? विश्व समुदायको किन विश्वास गुमाउँदैछ ? यस्ता व्यापक विषयको खोजि १४ औं महाधिवेशनले गर्नु पर्छ । यस्ता मूलभूत विषयलाई कुटनीतिक ढङ्गबाट हल गर्न सक्ने नेतृत्वको प्लेटर्फम हो आसन्न महाधिवेशन । भिरमा लडेको गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ तर काँध थाप्न भने किमार्थ सकिदैन् विडम्बना केहि नेताहरु पुरानै प्रवृतिलाई काँधमा हाल्ने प्रयत्नमा लागिरहेका छन् । यसले काँग्रेसलाई बनाउने हैन दुर्घटना तर्फ लग्ने छ । त्यस कारण यो महाधिवेशन पार्टी भित्रको बैधानिक छलफलको थलो हो । वैधानिक रुपले छलफल गरौं तर नेतृत्वको आँखामा पट्टी बाँधेर जबरजस्ती भारी बोकाउने काम नगरौं । यो प्रवृतिले काँग्रस पार्टीलाई सहि गति दिन सक्दैन् । कम्भकर्ण जस्तो निधाएको नेतृत्वले काँग्रेसको बिचार सिधान्तलाई जीवित राख्न सक्दैन् । त्यसका कारण नयाँ पुस्ता जसमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको आर्दशलाई बोक्न सक्ने क्षमता छ । त्यस्तो नेतृत्वलाई १४ औं महाधिवेशनको ताज शिरमा लगाऊ, काँधमा जिम्मेवारी बोकाउन, आम नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता एवम् वर्तमान समयको माग पनि हो । जय नेपाल ।